Izaho te-hanana ny tsara ny sakafo, zava-pisotro sy mihomehy, ny sasany koreana ao Korea Atsimo. Na iza na iza no mahalala izay aho dia afaka nahita toy izany mahafatifaty koreana? Ny toro-hevitra dia tena sarobidy, misaotra anao. Tsy fantatro ny momba ny Aterineto, fa misy ny fampiharana antsoina hoe Mokimokis, mba afaka mampiasa azy io mba hiresaka ny Koreana.
Dia nampiasa azy io voalohany.
Eny, mino aho fa afaka mampiasa azy io
Azonao atao koa ny manandrana mampiasa Kakapo Miteny, izay afaka manao resaka sy ny antso an-telefaonina ao anatin’ny vondrona. Na ireo fampiharana voasoratra ao koreana, fa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao ny fampiasana azy. Manantena aho nanampy farafaharatsiny nandritra ny fotoana kelikely. Mirary soa ary tiako hanana ny tsara ny sakafo, zava-pisotro, mihomehy, koreana monina any Korea. Na iza na iza no mahalala izay afaka hihaona tsara tarehy toy izany koreana? Ny toro-hevitra dia tena sarobidy, misaotra anao. Diniho fotsiny ny namako, ary izy dia tsara ny manana namana fantatrao raha tsy mangataka alalana. Raha toa ka tsy tena tia azy aho, dia tsy dia nanao be na izany aza, angamba izy dia mety efa niala ela izay. Ny lehilahy matetika no mieritreritra fa tsy lalina loatra, ary azo eritreretina fa tsy afaka mahatakatra ny izay maharatsy azy, maka sary miaraka amin’ny vehivavy iray hafa. Raha ny marina, izaho koa mahita fa mahatsikaiky fa anao no mieritreritra fa izany dia a Scam.
Izy koa tia azy, ary raha izany foana, dia mety leo, ary hiala
Toy ny olona iray izy, dia mila ny fahafahana sy ny fiainana manokana, ny momba ny tsiny. km dia ny fampiharana ny finday, ary inona momba izany, ny olona akaiky anao. Matetika ny olona hijery ny mombamomba sy ny mandefa hafatra ianao, na dia afaka mandefa azy ireo ny hafatra. Fa ny fampiharana no ao korea, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, diso na diso ny fanambarana, ny hosoka, na ny jono, na Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny fampiasana ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, diso na mamitaka, hosoka na niezaka ny phishing, manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, diso na mampidi-doza, ny hosoka, na ny jono
← Chat - Mahita vaovao Ankizivavy tao Shina io, noho ny fiarahana sy Shina Mampiaraka